यसको आकार घटाए बिना MMS द्वारा एक भन्दा बढि फोटो पठाउँदै आईफोन समाचार
MMS द्वारा एक भन्दा बढि फोटो पठाउँदै यसको आकार घटाए बिना
बर्लिन | | आईफोन अनुप्रयोगहरू, iOS 3
फर्मवेयर was.० विमोचन भएकोले हामी सबैलाई थाहा छ कि MMS मार्फत धेरै फोटोहरू पठाउन सकिन्छ, समान सन्देशमा कुल photos फोटोहरू।
एमएमएस फोटोग्राफहरूको सामान्य पठाउनाले तिनीहरूका मूल ढाँचा 800०० x x०० मा कटौती गर्दछ।
त्यहाँ एक ठूलो संख्यामा फोटो पठाउन एउटा ट्रिक छ र तिनीहरूका मूल २० 2048 × १1526२XNUMX ढाँचाको साथ।
अवश्य पनि, यस विकल्पको लागि छनौट गरेर, फोटोहरू भारी हुनेछन् र शिपिंग ढिलो हुनेछ।
तपाईंले पठाउन चाहानुभएका फोटोहरू भएको एल्बम चयन गर्नुहोस्।
तल दायाँपट्टि प्रतिमा चयन गर्नुहोस्।
यसले हामीलाई options विकल्पहरू दिनेछ: «सेयर», «कपि» र «मेट्नुहोस्»
यहाँबाट सामान्य प्रक्रिया परिवर्तन हुन्छ।
हामी पठाउनको लागि फोटोग्राफहरू चयन गर्दछौं।
सबै स्थानका लागि मैले पढेको छु कि तपाईं5वटा फोटोहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, तर यसले मलाई "" "सम्म चयन गर्न र अर्को चरणमा जारी राख्न अनुमति दिन्छ।
हामी "सेयर" चयन गर्दछौं र यसले हामीलाई सन्देश स्क्रिनमा लैजान्छ।
पठाउन र प्रेस प्रेस को लागी पाठ र इच्छित टेलिफोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्।
हामी «प्रतिलिपि select चयन गर्दछौं।
हामी फोटो अनुप्रयोगबाट बाहिर निस्कन्छौं र सन्देशहरू अनुप्रयोगमा जान्छौं।
हामी फोटोग्राफहरू टाँस्दछौं।
फोटोहरू तिनीहरूका मूल २० original2048 × १1526२XNUMX ढाँचामा पठाइनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS3» MMS द्वारा एक भन्दा बढि फोटो पठाउँदै यसको आकार घटाए बिना
मैले भर्खर आईफोन 3G जीमा परीक्षण गरें, र निम्न मलाई हुन्छ:
- यदि मैले दुई भन्दा बढी फोटोहरू र फ्रेम साझेदारी चयन गर्दछु, मात्र
मेल विकल्प देखा पर्दछ।
- यसले मलाई MMS विकल्प मात्र दिन्छ यदि म दुई वा कम फोटोहरू चयन गर्छु।
- यदि म दुई भन्दा बढि फोटोहरू प्रतिलिपि गर्छु र तिनीहरूलाई सन्देशमा टाँस्दछु, म ती दुई मध्ये मात्र संलग्न गर्दछु। मेलमा उही गर्दै, सबै प्रतिलिपि गरिएकोहरू संलग्न गर्नुहोस्।
- जे भनिएको छ यो सही छ: जब ती प्रतिलिपि गर्दा तिनीहरू मूल आकारमा हुन्छन् र साझेदारी गर्दा तिनीहरू कम हुन्छन्।
- मैले आईफोन S जीएस परीक्षण गर्नु पर्छ यो फरक तरीकाले काम गर्दछ कि भनेर।
के तपाईंलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ?
मेटलसीडीलाई जवाफ दिनुहोस्
प्रति एमएमएस + १ मा (+ करहरू)। कुनै तरीकाले म कुनै पठाउन जाँदैछु। म टिमिफोनिकालाई बढी पैसा दिने छैन।
मेगाजोनलाई जवाफ दिनुहोस्
उसले मलाई दुईवटा फोटोहरू एमएमएसको रूपमा पठाउन पनि दिन्छ, यदि मैले तीन फोटो राख्छु भने मात्र मेल विकल्प पाउँछु। मसँग 3.० अद्यावधिक भएको छ। के कसैले MMS को रूपमा दुई भन्दा बढि फोटो पठाउन सक्छ ???? धन्यवाद!
Andreu लाई जवाफ दिनुहोस्
निम्न मलाई हुन्छ।
यदि मैले5भन्दा बढी चयन गरें र त्यसपछि सेयरमा क्लिक गरें, मेल विकल्प देखा पर्दैन।
र MMS द्वारा फोटो पठाउन मेरो सीमा is हो। यदि मैले तिनीहरूलाई चयन गरेँ र तिनीहरूलाई प्रतिलिपि बनाएँ वा साझेदारी थिच्नुहोस् भने फरक पर्दैन।
Fabio लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले टिप्पणी गरेको छु कि विकल्पहरू "सेयर", "कपि" र "डिलीट" क्यामेराको फोटोहरूमा मात्र देखा पर्दछ, फोल्डरहरूमा आईट्युनहरू मात्र "शेयर" र "प्रतिलिपि" थपियो। राम्रो चाल, तर म9भन्दा बढी चिह्नित गर्न सक्षम छु र ती समस्या बिना पठाइएको थियो ...
शिकारीलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग आईफोन g जी g जी छ र यसले मलाई एकल फोटो पठाउन अनुमति दिदैन। यसले अर्जेन्टिनामा क्लारो अपरेटरको सन्देश पठाउँदछ जुन साइजले अनुमति सीमा भन्दा बढि छ।
Gerardor लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्दछ कि यो धेरै राम्रो छ, धेरै धेरै धन्यवाद, म तपाईं सबैलाई माया गर्छु
कलमे ०.0.8. (ओएस 3.0.०) - अपडेट - साइडिया / हिमपात - आईफोन / आईपड टच
AT&T नेभिगेटर एकदम राम्रोसँग काम गर्दछ